Mogadishu Journal » Guddoomiye Cali Gacal oo ka soo horjeestay xilka qaadista lagu sameeyay
Mjournal :-Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa ka soo horjeestay xilka qaadista maanta ay sheegeen baarlamaanka Galmudug in isaga ay ku sameeyeen, kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb.
Cali Gacal ayaa sheegay xubnaha xilka ka qaaday in aysan aheyn xildhibaano balse ay yihiin dad shacab ah oo la isku soo uruuriyay, midaasina aysan sax aheyn, wax walbana lagu dhameyn doono sharciga.
“Waan maqleynay arrinta nuucaas ah, xildhibaano uma aqoonsani raggaasi, waxa ay sameeyeen waxaa loo baahan yahay sida ay u dhaqan geli laheyd, arrin sax ah ma ahan, xildhibaano ma ahan waana dadka degaanka”. Ayuu yiuri gudoomiye Cali Gacal.
Arrintan ayaa waxa ay salka ku heysaa khilaaf xoogeystay shirkii Kismaayo kadib oo soo kala dhexgalay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan maamulka Galmudug.